देउवा सरकारले लियो एक्सन अब प्रचण्डलाई घरबाहिर निस्किनै खतरा ! – Media News Khabar
देउवा सरकारले लियो एक्सन अब प्रचण्डलाई घरबाहिर निस्किनै खतरा !
medianewskhabar// काठमाडौँ l पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि ’सुरक्षा थ्रेट’ बढेको खबर छ । सुरक्ष थ्रेट बढेपछि शेर बहादुर देउवा सरकारले एक्सन लिएको हो । घरबाहिर निस्किनै सुरक्षा खतरा भएको भन्दै सरकारले डीएसपीको कमाण्डमा थप प्रहरी टोली खटाएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णयानुसार शनिबारदेखि नै प्रचण्डको सुरक्षामा थप प्रहरी खटाइएको हो।
तर माओवादीको समेत समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले प्रचण्डमाथि सुरक्षा थ्रेट बढेको निचोडसहित थप प्रहरी पठाएका हुन्। ’अगुवा गाडीका लागि डीएसपीसहितका प्रहरी गएका हुन्’, स्रोतले भन्यो, ’ओली सरकारले अगुवा हटाएर पछुवा मात्रै राखिदिएको थियो। तर अब प्रचण्डलाई अगाडि पछाडि दुवैतिरबाट सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिनेछन्।’
’कुन भिआईपीलाई सुरक्षा चुनौती बढ्यो, घट्यो भन्ने कुरा सरकारले विश्लेषण गर्छ’, उनले भने, ’त्यही आधारमा सुरक्षा थप्ने घटाउने कुरा हुन्छ। यसलाई हामीले नियमित प्रक्रियाका रुपमा बुझ्दा हुन्छ।’
Previous देशभक्त हुनु नै राम भगवान र बुद्धको अवतार राजा ज्ञानेन्द्र शाहको लागि अभिशाप ठहर भयो !
Next अधुरा सपना पुरा गर्ने अभिभारा पुरा गर्न वडाको सभापतिमा निर्वाचित गराउन वडा स्थित सम्पूर्ण कृयाशिल सदस्यहरुलाई आग्रह